क्रसरमा पालिएको हरिणको आक्रमणबाट एक सख्त घाइते, थप उपचारका लागि काठमाण्डौ ल्याइँदै « LiveMandu
क्रसरमा पालिएको हरिणको आक्रमणबाट एक सख्त घाइते, थप उपचारका लागि काठमाण्डौ ल्याइँदै
१० असार २०७७, बुधबार ०९:२१
गणेश कटुवाल, सर्लाही । हिजो बेलुकी करिब ६ बजे सर्लाहीको लालबन्दिमा क्रसरमा पालेको हरिणको आक्रमणबाट एकजना स्थानीय सख्त घाइते भएका छन् । घटना लालबन्दि नगरपालिका वडा नं. १७ को हो । सोही वडाका वडा अध्यक्ष नवराज अधिकारीले सानैदेखि आफ्नै क्रसरमैं हुर्काइएको एकजोडि हरिणको सिङ प्रहारबाट भिम बहादुर कटुवाल घाइते भएका हुन् । हाल उहाँको लालबन्दिस्थित ‘टेक्सास अस्पताल’मा उपचारको लागि लगिएकोमा थप उपचारको लागि भर्खरै काठ्माण्डौ रिफर गरिएको छ ।
वडा अध्यक्ष अधिकारीद्वारा सर्लाही नगरपालिकाकै कालिञ्जोर तथा सर्लाही र महोत्तरीको सीमानामा पर्ने बाँके खोलाबाट अवैध बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन गरी वडा नं. १७ मै संचालनमा रहेको क्रसर मापदण्ड विपरित बस्तिको २०० मिटर भित्रै रहेको छ । घटना सोही क्रसर क्षेत्रमा भएको हो । २ वर्ष अघि स्थानिय प्रशासनको अनुगमनमा परेको उक्त क्रशर मापदण्डभित्र नपरेको भेटिएपछि खारेज गरिएको थियो । हालसम्म नविकरण समेत नगरेको उक्त क्रशर पैसा र पावरको भरमा अवैध संचालन हुँदैआएको छ । स्थानीय खेलमैदान कब्जा गरी क्रसरको लागि डम्पिङ साइटको रुपमा प्रयोग गरिदै आएको छ ।
वडा अध्यक्ष नवराज अधिकारी
अध्यक्षले यस विषयमा कुराकानी गर्न मानेका छैनन भने अवैध क्रसरमैं उनले पालेको हरिण मेरो हैन भन्ने कुरा गरि घटनाबाट पन्छिन खोजेका छन्, घाइतेको जिम्मा लिन मानेका छैनन् । वन्यजन्तुलाई घरमा पाल्नु आफैमा गैरकानूनी काम हो भने उक्त वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति धनी स्वयमले गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिबाटै हुने यस्ता गैरकानूनी गतिविधि हुनु हास्यास्पद र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
उनका दाजु यादव अधिकार हरिणलाई दुध खुवाउँदै (अहिले हरिण ठूला भइसकेको छन्)